आउँदो केही महिनाभित्र नेपाल शतप्रतिशत खोप लगाइएको देश हुन्छ : मन्त्री खतिवडा « रिपोर्टर्स नेपाल
आउँदो केही महिनाभित्र नेपाल शतप्रतिशत खोप लगाइएको देश हुन्छ : मन्त्री खतिवडा
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले केही महिनाभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्याउने दाबी गरेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलका एउटा सामान्य नेता भनेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले तपाईँहरुको अब केपी ओलीसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भने–‘सम्बन्ध कस्तो हुनु नि, केपी शर्मा ओली सामान्य एउटा राजनीतिक दलका नेता हुन् । इमानदारीपूर्वक भए इमानको सम्बन्ध हुन्छ, इमान भएन भने अब बेईमानहरुलाई गरिने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ ।’ उनले अहिलेलाई खोप पर्याप्त रहेको पनि बताए । प्रस्तुत छ मन्त्री खतिवडासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सर्वप्रथम स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभएकोमा बधाई छ, अब जनताको लागि के काम गर्दैहुनुहुन्छ, योजना के छन् ?
होईन, हामी सबैको साझा योजना हो । साझा ढंगले अघि बढ्ने हो । अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रीत गरेको छ । र, गर्नुपनि पर्छ । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । हामी ठाँउमा छौं, उनीहरुले नै यसको सतर्कता अपनाउने देखि लिएर आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को भ्याक्सिन केही महिनाभित्रै सबैले पाइसक्नुपर्छ । बालबालिकाको हकमा अझैपनि पर्याप्त व्यवस्था भइसकेको छैन् । १२–१८ वर्षको समूहको लागि तुरून्त प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । अन्य समूहका लागि आउने क्रम जारी छ । यसलाई रोक्न हुँदैन् । हामीले केही महिनाभित्र यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । तेस्रो लहर पनि आउने हल्लाहरु आएका छन् । अब त्यसको सत्यतालाई पुष्टि गर्न सकिँदैन् । त्यसका बाबजुद पनि सरकार तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अर्को नेपालको बजेट, यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका कामहरु गर्नपर्ने छ ।
तपाईंहरुले खोप भन्न लागेको धेरै भइसक्यो, नेपाली जनताले अब कहिलेसम्म खोप लगाउन पाउँछन् ?
नेपाली जनताले अब कुर्नुपर्दैन् । खोप आइसकेको छ, लगाउने क्रम पनि जारी रहेको छ । अहिलेलाई हामीसँग खोप पर्याप्त छ । अहिले भएका खोप नसकिदै अरु खोप ल्याउने काम पनि पाइपलाईनमा रहेको छ ।
उसोभए यसवर्ष सबै नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउँछन् ?
एकदम, यस विषयमा सबै जनता निर्धक्क भए हुन्छ । डोनेसन कहाँबाट आउँछ भनेर बस्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारले आफंै खरिद गरेर भएपनि नेपाली जनतालाई खोप लगाउने कामलाई हामीले रोक्नुहुँदैन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै माफियागिरी र भ्रष्टाचार छ, तपाईंले यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ ?
धेरै ठुला–ठुला च्यालेन्ज पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको दृढताले धेरै अग्ला पहाड पनि चढ्न सकिन्छ । त्यसकारण मूल कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो र हामीसँग भएका साधन स्रोतको सदुपयोग हो । दुरुपयोग नगरेर विवाद नआउने गरी काम गर्ने हो । अब विभिन्न कालखण्डमा विवादास्पद गतिविधिहरु पनि भएका छन् । स्वास्थ्य उपचारमासमेत विभिन्न अनियमितताका कुराहरु पनि आएका छन् । त्यस्तो अपराधपुर्ण काम गर्न नदिने ढंगले हामीले आफ्नो साधनस्रोतको प्रयोग गर्यौं भने हामीले तपाईंले भनेजस्तो सुधार्न सक्छौं ।
त्यसोभए स्वास्थ्य मन्त्रालय विचौलियाको हातमा जाँदैन ?
जाँदैन, यो सम्भव नै छैन् ।
जनताले देशभरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ?
पाउँछन्, त्यसमा कुनै शंका नै छैन् । आउँदो केही महिनाभित्र शतप्रतिशत खोप लगाइएको देश हुन्छ ।
नेकपा (एमाले) लाई फुटाएर मन्त्री हुनुभएको छ, अब पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ?
पार्टी त हामी अस्ति भर्खर बैठक बसेका थियौं । ३ महिनासम्म हाम्रो संगठन निर्माण हुन्छ । केन्द्रदेखि वडासम्म नै हामीले संगठन निर्माण गर्छौं । हामीले कार्य बिभाजन पनि गरिसकेका छौं । अब दशैं अगाडी पनि जति सकिन्छ काम हुन्छ । केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी सबैजना आफ्नो काममा जुट्नुभएको छ । दशैंको शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै आ–आफ्नो जिल्ला, गाउँ र टोलमा सबै साथीहरु लागिरहनुभएको छ । त्यही कार्यक्रमको लागि म अहिले पोखरा जाँदैछु ।
बाग्मती प्रदेशमा अब नयाँ मुख्यमन्त्री कहिले बन्ने ?
अब त्यो कुरा त प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो ।
तर, मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले भोलि नै विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ ?
ठीक छ, विश्वासको मत लिनुहुन्छ । पाउनुभयो भने बस्नुहुन्छ पाउनुभएन भने राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।
उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला ?
तपाईं आफैं हेर्नु, अब गणितले देखाउदैन र ?
तपाईं पार्टीको संगठन निर्माण गर्नको लागि पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, मन्त्री बनिसकेपछि तपाईंले अब देश र जनताको सेवा गर्ने कि पार्टीको ?
दुईवटै काम गर्ने हो । दलीय व्यवस्थामा दल पनि चाहिन्छ, सरकार पनि चाहिन्छ ।
अब नेकपा (एमाले) को अवस्था के होला ?
नेकपा (एमाले) त अब देखिहाल्नु भयो नि, ६ वटा प्रदेशमा सरकार थियो ध्वस्त पारे । बरु हामीले जोगाउँदैछौं ।
अब केपी शर्मा ओली र तपाईंहरुबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
सम्बन्ध कस्तो हुनु नि, केपी शर्मा ओली सामान्य एउटा राजनीतिक दलका नेता हुन् । इमानदारीपूर्वक भए इमानको सम्बन्ध हुन्छ, इमान भएन भने अब बेईमानहरुलाई गरिने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ ।
आगामी दिनमा तपाईंहरु गठबन्धनका साथ जानुहुन्छ अथवा बीचमै यो गठबन्धन टुट्छ ?
यो आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्माउने कुरा हो । अहिले सरकार बनाउने र अगाडी बढ्ने कुरामा संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा यो भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई मिच्ने र थिच्ने जुन काम गरेका थिए, त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएका छौं । अदालतले पनि त्यहीअनुसार संविधानबमोजिमको फैसला गरेको छ । त्यसकारणले संविधानवादलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयत्नमा बनेको गठबन्धन हो यो । यो गठबन्धन त्यसैगरि अघि बढ्छ ।
तपाईंहरुले नेकपा (एमाले)लाई फुटाउनुभयो तर, गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाउनुभयो हैन् ?
उहाँ नेपाली काँग्रेसको पुरानो मान्छे हो । यो प्रधानमन्त्रीज्युको हातको कुरा हो । उहाँले स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नुभएको छ । गजेन्द्रजी माननीयमा पनि उठिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ । संसद्मा पनि उमेद्वार भइसक्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसकारणले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अधिकार संविधानले पनि दिएको छ । योभन्दा अगाडि पनि बनाएको इतिहास छ । २५ जनामा एक जना त्यो पर्यो भन्दैमा यसलाई पहाड नै उचाल्न पर्ने देख्दैन म ।
‘कमरेड केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, यो कुरा दुनियाँले बुझेको छ’ : पद्मा अर्याल (भिडिओसहित)
नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको
‘भीम रावललाई चर्चामा आउन खुब रहर लाग्छ, यो उहाँको पहिलेदेखिकै स्वभाव हो’ : बडाल (भिडियोसहित)
नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य केशब बडालले हिजो (आइतबार)मात्रै अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका डा. भीम
‘म सभापति उठ्छु, ब्याक हुने सम्भावना छैन’’ : शशांक कोइराला (भिडिओसहित)
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आफूले सभापतिमा शेखर कोइरालालाई सभापतिमा सघाउने भनेर आफूले सहमति
शेरबहादुरजीले मलाई अगाडि सार्नुभयो भने विमलेन्द्रजीले पनि साथ दिन्छु भन्नुभएको छ : गोपालमान श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले १४औं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा उठ्ने
ओली अध्यक्ष बन्ने शतप्रतिशत निश्चित नै हो, महाधिवेशनमा माधव नेपालको पार्टीलाई बोलाउन आवश्यक छैन: पृथ्बीसुब्बा गुरुङ (भिडिओसहित)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा
‘अदालतमा नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा (एमाले) रहेको छ’ : विशाल भट्टराई (भिडिओसहित)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको दाबी : काेभिडकाे खाेपकाे अभाव हुन दिँदैनाैं
काठमाडौं, २७ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विराेध खतिवडाले काेभिडकाे खाेपकाे अभाव हुन नदिने बताएका
कर्णालीबासीले खान नपाउने र भोकै मर्ने अवस्था आउन दिन्न: मुख्यमन्त्री शाही (भिडिओसहित)
काठमाडौं, कात्तिक २० । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सरकारले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिने
काठमाडौं, मंसिर १३ । सरकारले मारुती सिमेन्ट प्रयोग गरे प्रयोग गर्न दिने निकायमाथि नै छानबिन